10 ganacsade oo dawladda federaalka ahi u taxaabtay xasbiga Xamar. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/10 ganacsade oo dawladda federaalka ahi u taxaabtay xasbiga Xamar.
10 ganacsade oo dawladda federaalka ahi u taxaabtay xasbiga Xamar.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabtay ganacsato badan oo Soomaaliyeed, kuwaas Muqdisho ku xiran in ka badan muddo shan maalmood ah.
Sheekh Cali Wajiis oo kamid ah ehellada Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan oo la hadlay laanta Af-Soomaaliga ee VOA, ayaa sheegay in sababta loo xiray ganacsatadan loogu sheegay in uu yahay wadashaqeyn dhex martay iyaga iyo Al-Shabaab.
Sheekh Cali Wajiis ayaa sheegay in guddiga gaadiidleyda gobolka Banaadir oo uu guddoomiye ku xigeen ka ahaa Xaaji Maxamuud iyo guddiga kale oo iskaashatooyinka gaadiidleyda gobolka Banaadir ay ku mideysanyihiin ay isqabteen kadibna ay Al-Shabaab isugu dacweeyeen.
Saraakiil kasocda AMISON, oo Taliska 21-aad ee Ciidanka Xoogga, oo kulan kula qaatay Dhuusa-mareeb.
Dab qabsaday goob shiidaalka lagu kaydiyo oo kutaallla Dhuusa-mareeb, oo wali aan la damin.
Dagaal u dhaxeeya DF iyo kooxda Jen Xuud oo ka socda duleedka Baladweyne
Turkiga oo Drones ku taageeraya Soomaaliya